Adeegga Macluumaadka Visa ee Ardayda | Daraasad Boqortooyada Midowday
Kusoo dhawow Adeegga Macluumaadka Visa ee ardayga
Waxaan nahay koox khubaro ah oo fadhigeedu yahay Boqortooyada Midowday (UK) oo bixisa caawimaad iyo hagitaan laxiriira Arjiyada Visa ee ardayda.
Sababo la xiriira Covid-19 Cudurkaan awgeed wuxuu abuuray arrimo muhiim ah qaabkii ay Jaamacaduhu u shaqeynayaan xilligan. Ardayda qaar ee hada ku sugan Boqortooyada Midowday (UK) ma awoodo inay guryahooda aadaan, taas oo sababa muuqata ay u abuurayaan xanaaq, kalinimo iyo kelinimo iyaga. Adeegga Macluumaadka Visa ayaa hadda ku soo biiraya #WeAreTo wadajir olole, si aan gacan uga geysano abuurista “Kooxda Tooska ah ee Internetka” oo loogu talagalay in lagu caawiyo qof walba oo taageero u baahan. Wadaagista farriimaha wadajirka iyo isku xirnaanta waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo inaan dhammaanteen xannaaneynno.
Waxaan jeclaan lahayn inaan dib u xaqiijinno dhammaan ardayda xilligan dhibaatadu saameysey, inaadan keli aheyn, waxaan u joognaa inaan caawinno.
Sababo la xiriira qawaaniinta iyo qawaaniinta Dowlada awgeed waxay noqotay meel maanka ku haysa ardayda qaar ee raba inay UK yimaadaan si ay wax u bartaan. Inta badan xafiisyada isqorista Jaamacadu waxay si siman u arkaan aaggan murugsan oo aad u badan.
Tani waa sababta aan ugu sameynay Adeegga Macluumaadka Visa loogu talagalay ardayda mustaqbalka dhow ee doonaya inay yimaadaan UK.
Kooxdayadu waxay ka kooban tahay koox hogaamisa shakhsiyaadka Sharciga, Tacliinta iyo kuwa caalamiga ah ee wax bartay, kuwaas oo halkan u jooga inay caawiyaan qof kasta iyo qof kasta, gebi ahaanba bilaa lacag la’aan ah.
Boqortooyada Midowday (UK) waxay soo jiidataa in kabadan 450,000 oo arday oo dunida dacaladeeda ka kala yimid, iyadoo in kabadan 130,000 oo arday ay ka yimaadeen Midowga Yurub. Wadahadalada Brexit iyo sidoo kale xeerarka adag ee ardayda Caalamiga ah guud ahaan, waxay sameyn doonaan helitaanka Visa si ay halkan wax ugu bartaan xitaa mid ka sii dhib badan. Soo hel wax badan oo ku saabsan waxaad u baahan tahay inaad wax ka barato annaga Halkan ka eeg bogga Caawinta Visa ee Jaamacadda.
Waxaan raadineynaa inaan bixino macluumaad Degdeg ah, Bilaash ah oo casriyeysan oo la siinayo qof walba oo dibada jooga, hubinta in nidaam codsi oo hagaagsan la gaaro.